iAfrika – Xhosa – Amasiko, Izithethe, Iziduko, Amaphupha neengcaciso zawo
Amaphupha neengcaciso zawo
Amaphupha amalunga nemifuno anokuchazwa ngeendlela ezahlukeneyo. Konke oku ke kuxhomekeke kumgangatho wemifuno, inkangeleko kunye nezenzo ezichaphazela umphuphi buqu. Imifuno ihlala ifuzisela ukhetho, kodwa ngokubanzi igrogrisa ngemicimbi emibi: ukusebenza nzima, ilahleko kunye nokukhathazeka. Iphupha elimalunga nesitiya esityalwe imifuno luphawu lobume beemvakalelo zakho, kunye nemicimbi yakaloku nje kunye nezicwangciso zekamva lakho. Ukuba kwiphupha lakho ubona isitiya esinemifuno … Funda okunye
Tags Ibhadi, Imifuno, Neemvakalelo
Amaxesha amaninzi ukuphupha ngeziqhamo kukholeleka ekubeni kubekho uphuhliso oluzayo futhi kubekho neziphumo ezihle ezilindelekileyo. Ixesha elininzi ukuphupha iziqhamo kungathetha into entle. Kodwa intsingiselo ijika ibe mbi xa isiqhamo sibonakala singekavuthwa, sityumkile, sonakele okanye singenakutyiwa. Amaphupha angathetha izinto ezahlukeneyo, ezi zingezantsi ayiko kuphela kweentsingiselo zamaphupha angeziqhamo. Xa uthe waphupha iziqhamo ezikhulu ezivuthiweyo nezihle okanye ezibukekayo, oko … Funda okunye
Tags Ibhadi, Intlahla, Iziqhabo
Amaphupha ngezixhobo zasekhitshini
Xa uphupha ngezinto ezahlukeneyo zasekhitshini, usoloko ucinga ngeenjongo zazo kunye nendlela ozisebenzisa ngayo izixhobo ephupheni elo. Umzekelo, isitovu esivutha izinto, sinokucebisa ngemfudumalo, ukukhanya kunye nentshisakalelo oza nayo kusapho lwakho. Intsingiselo yamaphupha ezinto zasekhitshini inefuthe lokwenyani, iimpendulo, kunye nokucinga okuqinisekileyo kwabaphuphi. Xa ubona izixhobo zasekhitshini ephupheni lakho, lisenokuthetha ukuba uyakufumana iindaba ezimnandi ezivela kude. Xa uphupha … Funda okunye
Tags Ikhitshi, Izixhobo
Ukutya emaphupheni kunokubonisa izinto ezahlukeneyo. Ukutya kufuzisela ubutyebi, ukuchuma, ukonwaba. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ukhumbule iinkcukacha zephupha lakho, ingakumbi iinkcukacha ezinxulumene nokutya okuphuphileyo. Amaphupha angokutya ahlala efuzisela indlela yethu yokuphila kunye nokwalamana kwethu. Kananjalo, uhlobo lokutya ophuphe ngako lunokubaluleka ngokukodwa kuwe kwaye ke lunganentsingiselo ekhethekileyo ebomini bakho. Ukuba uphuphe usitya ungxamile, iphupha elinjalo linokubonisa … Funda okunye
Izindlu emaphupheni zingabonakalisa ukuziqonda kwethu kunye nokuzazi kwethu. Umphambili wendlu ufuzisela indawo yobuntu bakho, ubonakalisa ubuwena kwihlabathi liphela, ngelixa indawo yangasemva yendlu ibonisa ukuzimela kwakho kwimicimbi yangasese, izinto ezifihliweyo kwabanye. Xa kutolikwa iphupha ngendlu, iinkcukacha zephupha zibaluleke kakhulu, ingakumbi uhlobo, imeko kunye nobukhulu bendlu leyo. Indlu enkulu umzekelo inokubonisa ukunqwenela kunye nokulindela izinto ezininzi/ezinkulu Ukuba … Funda okunye
Amaphupha amnandi ngamanzi
Singasoloko siphupha ngamanzi, kuba amanzi yinxalenye ebalulekileyo yobomi bethu. Apha, sijonga indlela yokutolika amaphupha ethu malunga namanzi ngokuhlalutya uphawu lwenkcubeko, kunye nendlela edibana ngayo neemvakalelo kunye nezenzo zethu. Kwaye kubalulekile ukwazi ukuba ezinkcazelo zingezantsi zinokwahluka ebantwini kodwa ke zezixhaphakileyo. Ukuze ufumane intsingiselo ethe ngqo ngephupha lakho kwanento ekufuneka uyenzile, dibana nomntu okwaziyo ukulawula amaphupha ukuba … Funda okunye
Ukufa yinto eyoyikwa ngumntu wonke ingakumbi ke ngoku xa kuzakuvelela ebuthongweni. Kungako xa uphuphe ngokufa kumele ucele ukucaciselwa ngabantu abakwaziyo ukulawula amaphupha. Ukuphupha kusifa wena Ukuphupha usifa ephupheni kungathetha izinto ezininzi. Kodwa okubalulekileyo ukujonge kukuba eso ingasisilumkiso sokuba uphelise umkhwa owenzayo ongafaka ubomi bakho esichengeni. Xa uphupha usifa ngenxa yokudutyulwa, oku kunokuthetha ukuba ukho lowo … Funda okunye
Tags Amaphupha ngokufa
Nangona xa sihleli singalelanga umtshato iyinto entle kunye nethamsanqa. Xa sikubona silele kubalibhadi kwaye kwayanyaniswa kakhulu nokufa. Ukuba uphupha utshata lilishwa elo ingakumbi emadodeni. Kuthetha ukuba kuya kubakho amaxesha anzima ebomini bakho kungekudala. Kwakhona ukuba uphupha omnye wabantu ephupheni lakho egula okanye ekhubazekile, oko kuthetha ukuba uyakuba nomtshato ongonwabanga. Ngamanye amaxesha ukuphupha utshata kunokubonisa umnqweno wakho womtshato … Funda okunye
Tags Ibhadi, Ukufa, Umtshato
Ukuphupha inyoka akuyonto imnandi kwaphela, amaxesha amaninzi kuthetha ukuba kukho utshaba olukuzungezayo kwaye lusondele kakhulu apha kuwe. Kwaye kuxhomekeka nasekubeni yeyiphi inyoka oyiphuphileyo. Umzekelo, ukuba uphupha inyoka enkulu (i-Anaconda umzekelo), elo phupha limalunga nomntu omdala okanye ukhokho. Ukuphupha irhamba oko kungathetha ukuba kukho umntu uzenza isihlobo sakho ekukhohlisa, nto leyo ithetha ukuba umntu osondelelene naye … Funda okunye
Tags Amabhadi, Iinyoka, Ukufa
Ukuphupha ngemali kungathetha izinto ezininzi ezinokwenzeka kuwe xa uhleli okanye ungaphuphi. Ixesha elininzi kukholeleka ukuba ukuphupha ngemali kungayinto elungileyo okanye isilumkiso kwinto embi enokwenzeka. Amaphupha angemali ezinkozo Xa uphuphe ngemali ezinkozo nokuba imdaka okanye imphlophe oko kungathetha ibhadi kwakunye nokufa. Imali ezinkozo ephupheni ikulumkisa ngezinto ezimbi ezisenokwenzeka kuwe. Xa uphuphe uchola imali emhlophe sukuba uzakubanebhadi ekuhambeni … Funda okunye
Amaphupha amabi ngamanzi
Amaphupha ngabantu abangasekhoyo